साहित्यमा रमाउँदै प्रकाश - Jhapa Online
‘हुने बिरवाको चिल्लो पात’ भने जस्तै प्रकाश संग्रौला आज साहित्यमा अघि बढी रहेका छन् । सानैदेखि साहित्यमा रुचि राख्ने संग्रौलाको उमेर मात्र १६ बर्षको छ । बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ७ गरीमनीमा बसोबास गर्दै आएका उनी दुर्गा मा. वि. गरामनीमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन् ।
अध्ययनसँगसँगै साहित्यमा लगाव राख्ने उनी १० बर्षको हुँदादेखि नै साहित्यक वातावरण पाएका थिए । आफ्ना जेठा दाजु प्रदिप संग्रौलाबाट उनले पहिलो पटक गजल, कविता सुनेको बताउँछन् । सुरुसुरुमा दाईको गजल, मुक्तक, कविताबाट प्रभावित भएका कारण साहित्यमा रुचि बढेको उनको भनाई छ । उनले चार हरफको छोटो मुक्तक लेख्दालेख्दै गजल लेख्न सुरु गरे र उनले अहिलेसम्म दर्जनौ बढी गजल, मुक्तक लेखि सकेका छन् ।
संग्रौला साहित्यमा आउनुको पछाडी हौसला प्रेरणा आफ्ना दाई प्रदिप र कवि विवेक आचार्यलाई दिन्छन् । साहित्यमा आउनुको ठुलो साथ घरमा बुबाआमाको रहेको उनी बताउछन् । आत्म सन्तुष्टीका लागि साहित्यमा कलम चलाउँदा आफू खुशी भएको उनको भनाई छ भने गजल लेख्दालेख्दै उनले २ वटा गितसमेत लेखि सकेका छन् ।
साहित्यमा रुचि राख्ने संग्रौलाले प्रत्येक हप्ताको शनिबार बेलुका ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ‘गजल विशेष’ कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रशारण गरेर थप साहित्यमा केही गर्न चाहेको उनले खुलाए । प्रत्यक्ष प्रशारण मार्फत उनले श्रोताको प्रतिकृयालाई वाचन गर्ने र आफूले सिर्जना गरेका गजलहरु प्रशारण गर्ने गरेका छन् ।
दोस्रो हप्तामा प्रशारण गरिसकेका उनले साहित्यमा रुचि राख्ने श्रोताहरुसम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको र आगाम िदिनमा आफ्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने बताएका छन् । कार्यक्रम मार्फत श्रोता साहित्यका अग्रजहरुबाट पनि हौसला साथै मार्ग दर्शन मिलेको उनको भनाई छ ।
नेपाली साहित्य क्षेत्र परिवर्तशील छ हिजो कलमले कापीमा वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने आज प्रविधिका कारण विश्वभरी नै देख्न र सुन्न सकिने भएको छ । समयसँगै साहित्य क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसैले आजको पुस्ताले समयलाई बुझेर प्रविधिसँग साहित्यलाई अघि बढाउने हो भने समग्र साहित्यमा विकास हुने देखिन्छ ।
प्रस्तुती: नरेश गुरुङ